Tag: chigariro | Martech Zone
Simbe Load Yemagariro Mabhatani neSocialite.js
China, Kukadzi 28, 2013 Muvhuro, Kukadzi 1, 2016 Douglas Karr
Nhasi ndanga ndine zuva rinonakidza pamwe newebhu webhu kuAngie's Chinyorwa. Chinyorwa chaAngie chave kuvandudza saiti yavo kuita raibhurari yezvishamiso ... uye panguva yese iyi ivo vachiramba vachikurumidza saiti yavo. Iwo mapeji anotakura nekumhanyisa kumhanya. Kana iwe usingatendi ini, pfuura iri peji pane Garage Masuo. Iyo peji inosanganisa mifananidzo, vhidhiyo, uye magariro mabhatani… uye ichiri kutakura mumamiriseconds Kuenzanisa saiti yavo neyangu kwakafanana nekumhanya
Vimeo inowana Vhidhiyo Musika Kugovana: Traffic Kumusoro 269%
Svondo, Gunyana 12, 2010 Muvhuro, September 13, 2010 Douglas Karr
Munguva pfupi yapfuura, ndanga ndichiita yakawanda yekutsvaga pavhidhiyo yevatengi vangu. Vhidhiyo iri kuve chinhu chakakura mune ruzivo rwepamhepo; kutaura zvazviri, pane mukana wakanaka wekuti yako saiti inokwenenzverwa zvachose nepesenti yakanaka yevashanyi kutoti iwe uchipa vhidhiyo. Nhare nyowani nyowani dzakagadziridzwawo kune vhidhiyo uye kuona kuri kupopota. Youtube yatove yechipiri yakakura injini yekutsvaga paInternet. Asi mamwe mapuratifomu evhidhiyo ari